रसिया विश्वकप फाइनलको त्यस्तो दृश्य जुन तपाईँले टेलिभिजनमा लाइभ देख्‍न पाउनु भएन – MySansar
रसिया विश्वकपको फाइनलमा धेरै नेपालीहरुको सहानुभूति समर्थन क्रोएसियालाई थियो। फ्रान्स सशक्त टिम थियो नै। नभन्दै फ्रान्सले ४-२ को अन्तरले फाइनल जितेर विश्वकप घर लाने भयो। यो विश्वकपको फाइनलमा गजबै भयो। आत्मघाती गोल पनि क्रोएसियाले नै गर्‍यो। भिएआर रिभ्युबाट पेनाल्टीमा गोल पनि क्रोएसियाले नै खायो। गोलकिपरको सिल्ली मिस्टेकबाट गोल गर्ने मौका पनि क्रोएसियाले नै पायो। यो सब दृश्य त तपाईँले टेलिभिजनमा लाइभ नै देख्नुभयो होला। तर एउटा दृश्य भने धेरै देख्न पाउनु भएन। त्यो हो मध्यान्तरपछिको केही मिनेटपछि कडा सुरक्षा व्यवस्था भएको स्टेडियममा चार जना दर्शक छिरे। उनीहरु छिरेको केही समयसम्म त टिभीमा लाइभ देखाइएको थियो तर पछि देखाइएन। मैदानमा उपस्थित दर्शक र पत्रकारहरुले भने यो दृश्य खिचेका छन्। हेर्नुस् टेलिभिजनमा लाइभ देख्न नपाउनुभएको दृश्य।
माथिको फोटोमा क्रोएसियाका डिफन्डर डेजान लोभ्रेनले मैदानमा पसेका व्यक्तिलाई तान्दै बाहिराउँदै गरेको देख्न सकिन्छ।
मैदानमा पस्ने मध्ये एक जना महिलाले त फ्रान्सेली खेलाडी एमबाप्पेसित हाइ फाइभ पनि गरिन्।
कसले लियो यसको जिम्मा?
रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले रंगशालामा बसेर हेरिरहेको खेलमा र कडा सुरक्षा व्यवस्था अपनाइएको यस्तो खेलमा मैदानमा पस्नु चानचुने कुरा हैन। यसको जिम्मा भने पुसी रायट्स नामको एउटा संस्थाले लिएको छ। फेसबुकमा यो घटनाको जिम्मा लिँदै संस्थाले लेखेको छ
सबै राजनीतिक बन्दीहरुलाई मुक्त गरिनु पर्ने, लाइकका आधारमा बन्दी बनाइन नहुने, र्‍यालीहरुमा गैरकानुनी गिरफ्तारी हुन नहुने, देशमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्ने, फर्जी आपराधिक आरोप लगाइन नहुने र बिना कारण जेलमा राख्न नहुने लगायतका माग संस्थाले गरेको छ।
को को हुन् त प्रदर्शन गर्ने?
प्रदर्शन गरेपछि पक्राउ पर्नेहरुमा Petr Verzilov, Olga Kuracheva, Olga Pakhtusova र Nika Nikulshina को नाम खुलेको छ।
Verzilov सन् २०१२ मा पुटिन विरोधी प्रदर्शनमा पक्राउ परेकी २८ वर्षीया Nadezhda Tolokonnikova का पति रहेछन्। Veronika Nikulshina २१ वर्षकी विद्यार्थी रहिछिन् जसलाई निका उपनामले चिनिने रहिछिन्। उनको फोटो
2 thoughts on “रसिया विश्वकप फाइनलको त्यस्तो दृश्य जुन तपाईँले टेलिभिजनमा लाइभ देख्‍न पाउनु भएन”
कसलाई के को धन्दा, कसलाई के को, न के न के
tank prasad jaisi says: